Ushizi nekhekhe likalamula, ikhekhe elilula ukulungiselela. | Ukupheka Kwekhishi
UMontse Morote | 08/04/2021 09:00 | Ama-Postres, Umfundisi
I-Lemon cheesecake ikhekhe elimnandi, elilula futhi eli-creamy, okulula kakhulu ukukwenza njengoba kufanele sigaye zonke izithako bese sikufaka kuhhavini, kulula lokho.
Amaqebelengwane khekhe ayi-dessert enhle, singathola izindlela eziningi zokulungiselela amakhekhe khekhe, kepha lena engiyiphakamisayo namuhla iyona evame kakhulu futhi eyaziwa kakhulu, ulamula ulinika lokho kuthinta i-asidi okuhle kakhulu. Amakhekhe eshizi nawo mahle ngoba singakwazi ukuwaphelezela ngezithelo, ujamu…. Kepha ngezithelo kuhle kakhulu.
I-yogurt engu-1 ethafeni noma kalamula
300 gr. ushizi usakazeka
70 gr. ufulawa wamabele (isitashi samabele)
Ukwenza ushizi nekhekhe likalamula sizoqala ngokuwasha ulamula, soma kahle bese sisusa i-zest bese sikhama uhhafu kalamula noma uwonke.
Siphendula i-ovini ibe ngu-180ºC ngokushisa nangaphezulu, sizobeka ithileyi phakathi.
Esitsheni sifaka amaqanda noshukela, sawushaya.
Sifaka iyogathi, hlanganisa.
Faka ushizi kakhilimu, ujusi kalamula kanye ne-zest. Sihlangana kahle kuze kuhlanganiswe yonke into.
Faka ummbila, uhlanganise kuze kungabikho zigaxa.
Spread isikhunta ngebhotela elincane bese ufafaza ufulawa, engeza isibambo sekhekhe.
Sibeka isikhunta kuhhavini, sikushiya cishe imizuzu engama-40 noma kuze kube yilapho ikhekhe loshizi selilungile, kulokhu sizobhoboza isikhungo ngomuthi wokuxubha amazinyo, uma liphuma lomile lizolunga uma lisamanzi thina shiya okungaphezulu.
Uma iphuma kuhhavini, mayiyipholise, ifafaze ushukela wokhilimu.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Ama-Postres » I-Lemon Cheesecake